ဖြူ စင်သောစိတ်ကလေး: April 2012
“ဟလို ဟလို အမေ လား။ အင်း သားပါ။”
“ဟုတ်တယ် အမေ စိတ်ပူနေမှာစိုးလို့ လေ။ ခု လမ်းထိပ်က ဆရာ ဦးကြည်အောင် ဆေးခန်းက ဆက်နေတာ။ ဆေးခန်းလာပြရင်းနဲ့လေ”
“ဗျာ ..ဟုတ်သက်သာတယ် အမေ။ အင်း နောက်ရက်တွေဆို အမေ တို့ ရိပ်သာ ဖုန်းခေါ်လို့ မရတော့ ဘူးလေ။ အမေ စိတ်အေးသွားအောင်လို့။အင်း အမေ စိတ်ချလက်ချသာ တရားထိုင်နော်။ ဟုတ် အမေ ဟုတ် ဂရုစိုက်မယ်။ ဟုတ်..ဟုတ်..”
ကဲပြီးပြီ။ ဒါကလည်း မွှေးရဲ့ အကြံညဏ်။ သားကိုချစ်လွန်းသော အမေ တစ်ယောက် စိတ်မချခြင်းများစွာနှင့် နောက်များ ပြန်လှည့်လာရင်ဖြင့် အောင်တေဇ တို့ ကိုယ်ကျိုးနည်းမှာကိုး။ ဒီတော့ အမေ စိတ်ချလက်ချဖြစ်သွား အောင် အမေရိပ်သာကိုထွက်သွားပြီးပြီချင်း ညနေဘက်ကို ဆေးခန်းကနေ ဖုန်းဆက်လိုက်ချင်းအားဖြင့် သင်္ကြန်မှာ နောက်ကြောင်းအေးစွာ သူပျော်ရပြီလေ။
မနက်ထဲက လမ်းထိပ်က မွှေးတို့ မဏ္ဏပ်မှာ ပိုက်တွေဆင်ရ။ sound box တွေဆင်ရနဲ့ တစ်မနက်လုံး အားသည်လို့ ကိုမရှိ။ ညနေပိုင်းမှ မွှေးတို့ မဏ္ဏပ်မှာ ရေစပြီး ကစားကြမည်။ မွှေး တစ်ယောက်ကတော့ ဆံပင်ကို ကပိုကရို ညှပ်ကြီးကြီးတစ်ချောင်းနှင့် သိမ်းထားပြီး ဂျင်းဘောင်းဘီ ဒူးလယ်လောက်နီးနီးအတိုလေးနှင့် ချည်သားအင်္ကျီ ခပ်ပွပွလေး ၀တ်ထားသည်ကိုက လှနေသည်။ သူမကိုကြည့်ရသည်မှာ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးနေသလိုပင်။
“ဟဲ့ မိုးအောင်ရေ.. အစ်မမှာတာ မမေ့နဲ့နော်။ မင်းသူငယ်ချင်းတွေ ခေါ်ပြီးလာဆော့တာတော့ အစ်မ ငြင်းစရာမရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် နှစ်တိုင်း အစ်မတို့ မဏ္ဏပ် စည်းကမ်းတော့ သိတယ်နော်။ လူငယ်တွေပီပီ လွတ်လပ်စွာ ပျော်ပါးတာကို လက်ခံတယ်။ ဒါပေမယ့် အရက်သေစာ သောက်စားခွင့်မပြုဘူး တစ်ခြားဘာဆေးညာဆေးတွေ သုံးခွင့်မပေးနိုင်ဘူး။ ပြီးတော့ မဏ္ဏပ်က ကောင်မလေးတွေကို ကိုယ့်မောင်နှမတွေလို သဘောထားပြီး စောင့်ရှောက်ရမယ်။ အစ်မ သေချာမှာတယ်နော်။ အေး ပြသနာတစ်ခုခုဆိုလို့ ကတော့ ပိုက်ဆံပြန်အမ်းပြီး မဏ္ဏပ် ပေါ်က ဆွဲအချပဲနော်. ”
“ဟုတ်ကဲ့ အစ်မ။ ကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်။ အစ်မတို့ မဏ္ဏပ်မှာမို့လို့ ကျွန်တော့်ကို အိမ်ကလည်း စိတ်ချလက်ချ လွှတ်တာလေ။ ကျွန်တော်နှစ်တိုင်းရနေတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ လွတ်လပ်မှုအခွင့်အရေးကို ပိတ်အောင်မလုပ်ပါဘူးဗျ စိတ်ချ ကျွန်တော် ကိုယ့်လူကိုယ် နိုင်အောင်ထိန်းမယ်..”
“အိုကေ. ခုလို လိမ္မာပြီး စကားနားထောင်တဲ့ အတွက် ကျေးဇူး မောင်လေး။ ကဲ ယောက်ကျားလေးတွေဘက်ပြီး တော့ မိန်းကလေးတွေဘက်။ ကဲကဲ မိန်းကလေးတွေအားလုံး နားထောင်ကြနော်။ အင်ကျီအ၀တ်အစားကို လွတ်လပ်စွာ ဆင်ယင်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ ခောတ်မှီလို့လည်းရတယ်။ ဒါပေမယ့် ဟိုပေါ် ဒီပေါ် တိုတိုပြတ်ပြတ်တွေ လုံးဝ မ၀တ်ပါနဲ့။ ရေစိုရင် အမြင်ရိုင်းမယ့် အင်ကျီမျိုး မ၀တ်ပါနဲ့။ ဒီနှစ်ချက်ကလွဲရင် ကြိုက်သလို ကိုယ်ပိုင်စတိုင်နဲ့ ဖက်ရှင်ထုတ်လို့ ရပါတယ်။ လူငယ်တွေကို လိုက်ချုပ်ခြယ်တာမဟုတ်ဘူနော်။ ညီမလေးတို့ အ၀တ်အစားနဲ့ အနေအထိုင်မတော်လို့ မဏ္ဏပ်ကမဟုတ်တဲ့ တစ်ခြားယောက်ကျားလေးတွေက ရိသဲ့သဲ့ဆိုရင် တို့ မဏ္ဏပ်က ယောက်ကျားလေးတွေကလည်း သည်းခံမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါဆိုရင် ရန်ပွဲတွေဖြစ်လာမယ်။ ဒါဆိုရင် နောက်နှစ်မှာ အစ်မတို့ရဲ့ ရေကစား မဏ္ဏပ်လေးကလည်းဖြစ်လာဖို့ရာ မသေချာတော့ ဘူး။ ဒါကြောင့် အစ်မက မောင်လေးတွေ ညီမလေးတွေကို မေတ္တာရပ်ခံတယ်လို့ သဘောထားပေးကြပါလို့ ကဲ အားလုံးသဘောတူကြရဲ့ လား ”
“သဘော တူပါတယ် သဘောတူပါတယ်။ ”
“ကဲ သဘောတူတယ်ဆိုရင် ဒီနေ့ ညနေ ပိုင်း ၃ နာရီကနေစပြီး အစ်မတို့ မဏ္ဏပ်က ရေစဖွင့်ပေးမယ်။ ခု မဏ္ဏပ် ပြင်ဆင်တာလည်းပြီးပြီမို့ အိမ်ပြန်ပြီးထမင်းစားကြ ပြီးတော့ ညနေပိုင်းရေကစားရင် အလှဆုံးဖြစ်ဖို့ အတွက် ပြင်ဆင်ကြပေတော့ .. အစ်မတို့ရဲ့ မေပိတောက် မဏ္ဏပ်ကြီးက မောင်လေး ညီမလေးတွေအားလုံး WELCOME ပါရှင်..ကဲ ခုတော့ ဘယ်သူမှ သင်္ကြန်ရေ မထိရသေးခင် ဟောဒီက အစ်မကြီးက ရေစလောင်းပါပြီ ရှင်..ဟားဟား”
ပြောပြောဆိုဆို မွှေး တစ်ယောက် သူမဘေးနားမှာ ရှိသော ရေပုံးထဲမှ ရေများဖြင့် သူမရှေ့မှ သူများအား ၀ုန်းကနဲ လောင်းချလိုက်သည်။
“အား စိုကုန်ပြီး..ဟေး…ကျွန်တော်တို့လည်း ပြန်ပက်မယ် ကဲ အပေါင်းအသင်းတို့ ရေ လာကြဟေ့ ဒီမှာ တိုင်ကီထဲမှာ ရေစက်စမ်းထားတဲ့ ရေတွေရှိတယ်ဟ”
ပြောပြောဆိုဆို လူငယ်အုပ်စုဘက်မှလည်း မွှေးတို့ ရှိရာ မိန်းကလေးတွေ အုပ်စုဘက်ကို ရေတွေနဲ့ လှမ်းပက်ကြသည်။ သူတို့တွေကိုကြည့် ပြီး ဇ တစ်ယောက် ပျော်ရွှင်နေမိသည်။ ဒါက သူ့ တစ်သက်တာမှာ ပထမဆုံး ဆင်နွှဲဖူးတဲ့ သင်္ကြန်ပွဲကိုး…
“ဟားဟား..ကဲကဲ တော်ကြတော့ တော်ကြတော့ အပူတွေ ရှပ်ကုန်တော့ မယ် အိမ်ပြန်ကြတော့ ညနေ ၃ နာရီ ပြန်လာခဲ့ ကြနော်။ ”
ပြောပြောဆိုဆိုဖြင့် သူမ လူအုပ်ထဲမှာ ထွက်လာခဲ့ ပြီး။
“ဟားဟား… ကဲ ဇ ရေ ငါတို့လည်း မိုးတို့ အိမ်ကို သွားကြစို့ ငါ့ အင်ကျီတွေစိုနေပြီဟ။ မိုး တို့ အိမ်မှာ အင်ကျီ ၀င်လဲပြီး ထမင်းသွားစားရအောင်။ မဏ္ဏပ် ကိုတော့ ထားခဲ့လိုက်ရတယ်။ မိုးတို့ အိမ်ကနေဆိုရင် လှမ်းမြင်နေရတာပဲ လေ. လာလာ သွားကြစို့ . ငါ ဗိုက်ဆာပြီဟ..”
“ဟယ် မမွှေး နင်ရေတွေ စိုလာပြီ။ သွားသွား ငါ့အခန်းထဲမှာ အင်ကျီသွားလဲ။ လာလေ ဇ ထမင်းစားခန်းထဲ သွားရအောင်။ ဘာမှ ရှက်မနေနဲ့လာ။ ထမင်းစားခန်းထဲမှာ မေမေ လည်းရှိတယ်။ ဟဲ့ မွှေး မြန်မြန်လုပ်နော် ငါ ဗိုက်ဆာနေပြီ နင့် ကို စောင့်နေရတာ..”
“အေး ပါ..မြန်မြန်လဲမှာပါဟ ငါလည်း ဗိုက်ဆာပြီး ”
“လာ လာ သားတို့ သမီးတို့ ဒီမှာ ထမင်းစားဖို့ အဆင်သင့်ပဲ။သမီးမိုးရေ အမေ ဘုရားခန်းထဲမှာ တရားလေး သွားနာလိုက်အုန်းမယ်နော်.. သူငယ်ချင်းတွေကို ထမင်းကောင်းကောင်းကျွေးလိုက်နော်. “
“ဟုတ်ကဲ့ အမေ.. ”
“ အန်တီရော ထမင်းမစားဘူးလား ဟင် မိုး။ ”
“မေမေက အိမ်မှာနေရင်း ဥပုပ်စောင့်တယ်လေ။ ၁၂ နာရီ မထိုးခင်ထဲက ထမင်းစားပြီးပြီ။ မနက်ဖြန် မွှေးတို့ အမေလှည့် ငါ့ အမေက ဘုန်းကြီးကျောင်းသွားပြီး ဥပုပ်စောင့်မယ်။ ငါနဲ့ မွှေးကို တစ်ယောက်တစ်လှည့်စီ စောင့်ကြည့်ကြတာ။ ဘာလို့ ငါ့အိမ်ဖြစ်လဲဆိုတော့ ငါ့အိမ်က မဏ္ဏပ်နဲ့နီးတယ်လေ။ မနက်ထဲက မွှေးအမေက မွှေးအတွက်ဆိုပြီး အထုပ်လာပို့ ထားပြီးသား။ ညကျရင်လဲ မွှေးက ငါ့အိမ်မှာပဲ အိပ်မှာ.”
“အင်း ကောင်းတာပေါ့။ ညကျရင် ငါသာတစ်ယောက်တည်း အိမ်မှာ။ နင်တို့ အမေတွေက တော်တယ်နော်။ ငါ့အမေ ဆို..”
“ကဲ တော်ပါ ဇ ရာ။ ငါတို့က အစထဲက ဒီလိုပဲ။ သားသမီးနဲ့ မိဘကြားမှာ ယုံကြည်မှုပေါ့။ ပြီးတော့ ငယ်ငယ်လေးထဲက ဒီလိုပဲ ဆိုတော့ ငါတို့ မိဘတွေက ရိုးနေပြီ။ ဘာမှနင့်ဘ၀နဲ့ နှိုင်းယှဉ်မနေနဲ့ ။ ဟုတ်ပြီလား.. ကဲ ဒေါ်မိမိမွှေးရေ … မပြီးသေးဘူးလား။ ဒီမှာ ဗိုက်ဆာလွန်းလို့ အူလိမ်နေပြီဟေ့ …”
မွှေး တစ်ယောက် အပေါ်ထပ်မှ ပြေးဆေးလာပြီး ထမင်းစားခန်းထဲဝင် လက်ကို ကျကျနန ဆေးပြီး စားပွဲမှာ ၀င်ထိုင် ပြီးတော့ ..
“အား.. မွှေးနေတာပဲဟေ့ .. မိုး ဘာဟင်းချက် ဒီနေ့ ”
“ကြက်အသည်းအမြစ်ရယ် မုန်လာဥချဉ်ဟင်းရယ် ပြီးတော့ ငါးပိတို့စရာနဲ့ ဒီမှာ ရှင့် အကြိုက် ကန်ဇွန်းရွက်ကြော် စပ်စပ်လေး.”
“ဟာ.. ရှယ်ပဲ ငါတော့ ဆွဲပြီး ဟဲ့ မိုး.. ဇ ကို ဟင်းထည့်ပေးလိုက်တော့ ။”
“ဟဲ့ မိမွှေး လက်နဲ့ စားမလို့ လား”
“ဟီး ဟုတ်တယ်ဟ အန်တီလက်ရာ ဟင်းကို ဒီလိုအားရပါးရ လက်နဲ့ စားမှ မြိန်တာဟ။ ဒါကြောင့် .. ဟဲ့ ဇ စားလေ ရှက်မနေနဲ့ ရှက်နေရင်တော့ နင် ငါးပိနဲ့ ညားသွားမယ် ငါ့တော့ စားပြီးဟေ့ ”
“ဟွန်း မိန်းမ ငတ်ကြီးကို ကျတယ်။ ဇ နင် အသည်းကြိုက်တယ် မဟုတ်လား။”
မိုးတစ်ယောက် ဇ ပန်းကန်ထဲကို သဒ္ဒါပိုစွာဖြင့် ကြက်အသည်းအမြစ်များကို ခပ်ထည့်ပေးနေပြန်သည်။
“အင်း ကြိုက်ပါတယ်။ ရတယ် မိုး..ရတယ် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ထည့်စားလိုက်မယ်။ နင်လဲ စားလေ။”
မွှေး တစ်ယောက်ကတော့ မုန်လာဥချည်ရည်ဟင်းနှင့် ငါးပိတို့စရာ အစုံ ကန်ဇွန်းရွက်ကြော် နှင့် မြိန်ရည် ရှက်ရည် လွေးနေလေပြီ။
“မွှေး ဒီမှာရော့ ကြက်အသည်းအမြစ်. ထည့်စားလေ။ ငါးပိနဲ့ ချဉ်ရည်ဟင်းပဲ စားနေတယ်.”
မွှေး ပန်းကန်ထဲသို့ ဟင်းခတ်ထည့်ပေးဖို့ ပြင်နေသော ဇ အား လက်ကာပြလိုက်ရင်း.
“နေနေ..ဇ ငါက ချဉ်ရည်ဟင်းနဲ့ ငါးပိတို့ စရာ ပိုကြိုက်လို့ဟ.စား စား ကိုယ်ဘာသာကိုယ်. ငါ ထည့်စားလိုက်မယ်”
ထမင်း ပလုတ်ပလောင်းနှင့် ပျာပျာသလဲ ငြင်းနေသော မွှေး ကို ဇ နားမလည်မိ။ ဟင်းလေးထည့်ပေးတာကိုများ ဖြစ်နေလိုက်တာလို့ သူထင်မိသည်။ ဇ နားမလည်ပေမယ့် နားလည်လိုက်တဲ့ သူက မိုး ။ မွှေး ကတော့ မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ထမင်းကိုသာ ဆက်ပြီးစားနေသည်။ ဒါပေမယ့် သူမရင်ထဲမှာတော့ ခိုးလို့ ခုလု မိုး ရိပ်မိမှာ စိုးလို့ သာ သူမ ဟန်မပျက် ထမင်းဆက်စားနေခြင်းဖြစ်သည်။ဟူး…ခက်တာပဲ။ ဒီနှစ်ကောင်နဲ့တော့ … ဒီနှစ်ကောင်နဲ့ ဆိုတော့ သူကိုယ်တိုင်ကရော..
ညနေပိုင်းရေပက်ချိန်တွင်တော့ နွေပူပူမှာ ရေစိုကာလှနေသော မွှေး ကို ဇ ကြည့်လို့ကိုမ၀။ နဂိုထဲကမှ ဖြူဝင်းသော အသားအရည်ကြောင့် ခုလိုရေစိုနေတော့ သူမ၏အလှက ပိုပြီးထင်းနေသလိုလို။ ဇ ၏မျက်လုံးများက မွှေး ဆိုသော ကောင်မလေးထံမှ အကြည့်တွေလွှဲလို့မရ။ ဇ ဆိုသော ကောင်လေးထံမှ အကြည့်တွေ လွှဲလို့မရသည်က မိုး။
တစ်ချိန်လုံးနီးနီး မွှေး ကိုစိုက်ကြည့်နေသော ဇ ကြောင့် မိုး ရင်ထဲမှာ ဗလောင်ဆူနေသည်။ တစ်မျိုးပဲ စိတ်ပဲတိုနေသလိုလို အလိုမကျသလိုလို သူမ၏ ဆူပုပ်ပုပ်မျက်နှာကြောင့်ပင် တစ်ချို့ဆို သူမကို ရည်းစားပျောက်လို့ မှိုင်ဆိုပြီး သီချင်းတွေတောင် စောင်းဆိုသွားကြသေးသည်။ အရင်နှစ်တွေကလို မိုး မပျော်မိ။ အလိုလိုနေရင်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရေကစားနေသော မွှေး ကိုပင်သူမ စိတ်တိုမိနေသည်။
မွှေး ကိုယ်တိုင်ကတော့ တမင်တကာပင် မိုးနှင့် ဇ တို့၏ အဖြစ်ကို မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ဘာမှ မဖြစ်သလိုနှင့် ရေကစားပြနေလိုက်သည်။ ဒီအချိန်မှာ သူမနေတတ်မှဖြစ်မည်။ မနက်က ထမင်းဝိုင်းမှာ သူမ နဲနဲ over ဖြစ်သွားသည်။ တစ်ကယ်တမ်းက မိုး ကိုစိတ်ပူသည့် စိတ်ဖြင့် သူမ လွတ်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ အခြေအနေက မွှေး ဘက်က ဇ နှင့် ပတ်သတ်ပြီး လိုက်ကာပေးနေလေ မိုး အတွက် ပိုပြီး ဖိအားပေးသလိုဖြစ်သွားမှာ စိုးသည်။ ပြီးတော့ ညီမအစ်ရင်းတစ်မျှချစ်ရသော သူငယ်ချင်းလေးနှင့် ဇ အတွက်ကြောင့်တော့ဖြင့် ခင်မင်မှုတွေ မပြောင်းလဲသွားစေခြင်။ ဒီကိစ္စမှာ မွှေး လိမ္မာပါးနပ်စွာ ရှောင်တတ်မှ ဖြစ်မည်။
မနက်ပိုင်း မဏ္ဏပ်မှာ မုန့်လုံးရေပေါ် စတုဒီသာကျွေးသည်။ အရင်နှစ်တွေကဆို မွှေး သည် မနက်စောစော မဏ္ဏပ်မှာ အသံစာစာဖြင့် ဦးဆောင်နေလောက်ပြီ။ ဒီနှစ်ကတော့ မိုး ဦးဆောင်မှ ဖြစ်မည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဇ မျက်လုံးထဲမှာ မွှေး ကိုခဏလောက်ဖျောက်ထားပြီး မိုး ဆိုသော ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို မြင်သွားစေချင်သည်လေ။ထို့ကြောင့် တမင်တကာပင် မွှေး သည် မဏ္ဏပ်မှာ မနေပဲ လမ်းထဲက အိမ်တွေကို မုန့် လိုက်ဝေသည်။ မိုး နှင့်တူတူ ဇ ကို မဏ္ဏပ်မှာ တာဝန်ပေးပြီးထားခဲ့ သည်။ ဇ ရေ နင့် ရင်ဘတ်ကြီးထဲမှာ မိုး ဆိုတဲ့ ကောင်မလေး ကိုပဲ မြင်လိုက်စမ်းပါဟာ။ ငါ..ငါ ကတော့..
အိပ်ယာထဲမှာ ဟိုဘက်လှိမ့် လိုက် ဒီဘက်လှိမ့် ဖြင့် အိပ်မပျော်နိုင်သော မိုး အား မွှေး အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေမိ သည်။ မွှေး စဉ်းစားမိသည်။ မိုး နှင့် စကားပွင့်ပွင့် လင်းလင်းပြောလိုက်လျှင် ကောင်းမည်ထင်သည်။ ဒီအတိုင်းဆို မည်သည့်အချိန်ပေါက်ကွဲမည်လဲ မသိနိုင်သော ဗုံးတစ်လုံးနှင့်တူနေသည်။ အချိန်မရွေး ထပြီးပေါက်ကွဲနိုင်သလိုဖြစ်နေ သည်။ ပြီးတော့ ဒီနှစ်သင်္ကြန်မှာ မွှေး စိတ်အရမ်းပင်ပန်းနေပြီ။ သင်္ကြန်ကို စိတ်လွတ်လက်လွတ် မပျော်ရ။ တစ်ခုခုတော့ လုပ်မှဖြစ်မည်။ မနက်ဖြန်ဆို သင်္ကြန်အကြတ်နေ့ .. မွှေး စဉ်းစားရင်း အိပ်ယာမှ ငေါက်ကနဲ ထထိုင် လိုက်မိသည်။
ရုတ်တရက် မွှေး ထထိုင်လိုက်သောကြောင့် မိုး လန့် သွားသည်။
“အောင်မလေး မိမွှေး ရယ် လန့် တာ ။ ငါက နင်အိပ်နေပြီ ထင်လို့ ”
မွှေး ခေါင်းကို အကြောင်းမဲ့ တစ်ဗျင်းဗျင်းကုတ်ရင်း..
“မိုး ငါတို့ နှစ်ယောက် စကားကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောကြရအောင်။ ငါမအောင့်အီးနိုင်တော့ ဘူးဟ။ဒီနှစ် သင်္ကြန်မှာ ဒီလို စိတ်ဖိစီးစရာကြီးနဲ့တော့ မဖြတ်သန်းခြင်ဘူးဟာ။ပြီးတော့ ငါ နင့်ကို ဘယ်လောက်ထိ ခင်ပြီး ချစ်သလဲဆိုတာ လဲ နင်သိသားနဲ့ ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ငါ နင်နဲ့ ထာဝရ သူငယ်ချင်းပဲ ဖြစ်ချင်တယ်။ နင် ဘာဖြစ်ခြင်လဲ ဖြစ်ခြင်တာတွေ လိုခြင်တာတွေ အားလုံးငါပေးမယ်ဟာ။ အရေးကြီးတာ နင့်စိတ်ထဲမှာ ငါ့ကို အမြဲတမ်း ထာဝရသူငယ်ချင်း တစ်ယောက်အဖြစ် ခင်မင်နေရမယ်။ နင်နဲ့ငါအမြဲတမ်း သူငယ်ချင်းဖြစ်နေရမယ်။ ငါတို့ နှစ်ယောက် ဘယ်တော့ မှ မခွဲခွာ ကြေးဟာ..နော်. ”
မထင်မှတ်ပဲ မွှေး ကဒီလို ပြောချလိုက်တော့ မိုး ၀မ်းနည်းသွားမိသည်။ သူမကိုယ်တိုင်က မွှေး ကို ဇ နှင့် ပတ်သတ်ပြီး စိတ်ထဲမှာ ငြိုညင်နေမိသည် မဟုတ်လား။ သူငယ်ချင်းရယ်.. မိုး မှားသွားတယ် ..
“ဟင့် ဟင့် မွှေး ..သူငယ်ချင်း ငါ တောင်းပန်ပါတယ်ဟာ။ နင် နင် ငါ့ ကို စိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်။ ငါ့နှလုံးသားရဲ့ ပထမဆုံး ရင်ခုန်သံမှာ ငါ့ စိတ်တွေ ဘာဖြစ်သွားမှန်း မသိလိုက်လို့ ပါ။ ငါ ဇ ကိုချစ်တယ်။ ဟင့် ဟင့် …”
မွှေးရဲ့ ပုခုံးကိုမှီပြီး ကြူကြူပါအောင် ငိုနေသော မိုး ကိုကြည့်ပြီး စိတ်မကောင်းမိ။ သူငယ်ချင်းရယ် နင့်ရင်ခုန်သံကလဲ ဟာ ဇ နဲ့ ကြမှများ စရတယ်လို့ ။ မိုး၏ စိတ်သည် အနည်းငယ် စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တတ်သည်ကို သူမသိသည်။ ပြီးတော့ မိုး သည် သူမကဲ့ သို့ စိတ်ထားပြတ်သားခိုင်မာသူမဟုတ်။ သူမကသာ ဟန်ဆောင်ကောင်းပေမယ့် မိုး သည် ဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့ သူတစ်ယောက်မဟုတ်။
“မိုး မိုး.. နင် ငါ့ ကို သေချာကြည့်စမ်း။ မငိုနဲ့ သူငယ်ချင်း။ ငါပြောတာ သေချာနားထောင်နော်…နားထောင်မယ် မဟုတ်လား ..”
မိုး မျက်ရည်များကို သုတ်ရင်း ခေါင်းညိမ့် ပြလိုက်သည်။
“ငါ ဇ ကို စိတ်မ၀င်စားဘူး မိုး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ ငါက ယောက်ကျားဆိုရင် ပြတ်ပြတ်သားသားနဲ့ ငါ့ရှေ့မှာ မားမားမတ်မတ် ရပ်နိုင်တဲ့ သူကိုပဲ ငါသဘောကျတယ်။ဇ လို ပျောံညံ့ညံ့ ယောက်ကျားတစ်ယောက်ကို ငါဘယ်လိုမှ ငါ့ရဲ့ ဘ၀ခရီးဖော်အဖြစ် မရွေးချယ်နိုင်ဘူး။ ဒီတော့ သူ့ဘက်က စိတ်ဝင်စားသည်ဖြစ်စေ မ၀င်စားသည်ဖြစ်စေ ငါလုံးဝ ဂရု မစိုက်ဘူး။ အရေးကြီးတာ ငါ စိတ်ဝင်စားတာ ငါ စိတ်ပူတာက နင်ပဲ မိုး။”
“ငါမှားသွားတယ် ဟာ.. ”
“နင်မမှားပါဘူး မိုး။ ဒီလိုပဲ လူတိုင်း အချစ်ဆိုတာနဲ့ ကြုံတွေ့လာကြပြီဆိုရင် တစ်ချက်တစ်ချက်တော့ လွတ်သွား တတ်ကြတာပဲ။ ဒါပေမယ့် နင် နားလည်ထားဖို့ တစ်ခုတော့ လိုတယ်။ အဲဒါဘာလဲဆိုတော့ ဇ ရဲ့ စိတ်ကို နင် ရော ငါရော မပြောင်းလဲနိုင်ဘူးဆိုတာပဲ။ ဒါပေမယ့် တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ သူပြောင်းလဲလာနိုင်တယ်။ ဒီအတွက် အချိန်တစ်ခု လိုအပ်တယ်။ နင် ငါပြောတာကို နားလည်တယ် မဟုတ်လား မိုး. ”
“နင် နားလည်ထားဖို့က ဇ ဆိုတဲ့ သူဟာ ဘယ်တော့မှ ငါ့ရဲ့ ချစ်သူတစ်ယောက် ဖြစ်မလာနိုင်ဘူး ဆိုတာပဲ.”
“အေးပါ သူငယ်ချင်းရာ ငါနားလည်ပါပြီး ငါ နားလည်ပါပြီဟာ…နော်”
မွှေး ခေါင်းညိမ့် ပြလိုက်ရင်း..
“သူငယ်ချင်း အိပ်ကြရအောင်နော်။ မနက်ဖြန်ကြရင် အရင်နှစ်တွေလိုပဲ ငါတို့ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် သင်္ကြန်ဆိုတာကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ဖြတ်ကျော်ကြရအောင်နော် ..”
မိုး တစ်ယောက်ကတော့ စိတ်ကျေနပ်သွားပြီထင်။ မွှေး ကိုဖက်ပြီး အိပ်ပျော်သွားလေပြီ။ ဒီတစ်ခါ အိပ်မပျော်နိုင်သူက မွှေး။ သြော် ဧပရယ်နွေ ဆိုတာ ပူပြင်းပေမယ့် ဒီဇင်ဘာဆောင်းလို အေးချမ်းတဲ့ လလဲ ရှိနေတာပဲလေ။ သူမရဲ့ ရင်ထဲမှာလည်း လောလောဆယ် နွေလိုပူနေပေမယ့် အချိန်တစ်ခုခုကြရင်ဖြင့် ဒီဇင်ဘာနှင်းတို့ဖြင့် ဝေနေမှာပါလေ။
ဒီဇာတ်လမ်းလေးကို သင်္ကြန်မတိုင်ခင် အပြီးရေးမယ်လို့ အားတင်းထားပေမယ့် မထင်မှတ်ပဲ ခရီး တစ်ခုသွားဖြစ်လိုက်တာကြောင့် ခုတော့ နောက်ကျသွားရပြီ။
ဇာတ်သိမ်းပိုင်းလေးကို ခပ်မြန်မြန်လေး ရေးပေးပါ့မယ်လို့ အကြောင်းကြားရင်း..
အလည်လာကြသော ဘလော့ မောင်နှမများ ကျန်းမာလို့ ချမ်းသာကြပါစေရှင်။